एमालेको महाधिवेशनमा चितवन आउनेहरुले चितवनको विकास देखेर दङ परे ; मेयर रेनु दाहाल
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल महानगरको काम र पार्टीको पालिका अधिवेशनका कारण व्यस्त छिन्। आफू मेयर निर्वाचित भएपछि महानगरमा नाटकीय विकास गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ। १० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर
महानगरका सबै वडा स्थानमा पक्की सडक पुर्याउन सफल रहेकी उनी शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायतका क्षेत्रमा सोचेभन्दा बढी काम भएको दाबी गर्छिन्। उनका पिता तथा चितवनबाटै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण यति
धेरै बजेट महानगरमा ल्याउन सफल भएको उनले बताइन्। विकास निर्माणको हिसाबले आगामी चुनावमा भरतपुरमा माओवादीले नै जित्ने दाबी पनि उनले गरिन्। नेकपा एमालेले चितवनमै आयोजना गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशनले भरतपुरको र आफूले गरेका विकासका कामको
थप प्रचार हुने दाहाल बताउँछिन्। त्यसका लागि उनले एमालेलाई धन्यवाद समेत दिइन्। भरतपुर महानगरका कामकारबाही प्रचण्डको सम्भावित उम्मेदवारीलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर दाहालसँग गरेको कुराकानी चुनाव जितेको चार वर्षमा के कति काम गर्नुभयो त? यो
चार वर्षको अवधिमा गरेको समग्र कामको समीक्षा गर्नुपर्दा चुनावमा गरेको प्रतिबद्धताभन्दा बढी काम गर्न सफल भएँ। केका आधारमा यस्तो दाबी गर्दै हुनुहुन्छ? विकास निर्माणका आधारमा भन्दैछु। समृद्ध भरतपुर बनाउने यसलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर चुनावमा हामीले जनताको बीचमा जे संकल्प प्रतिबद्धता गरेका थियौँ ती सबै भए।
र त्यसबेला भनेको भन्दा पनि बढी काम र योजना समेत कार्यान्वयन भइसकेका छन्। अर्काे समृद्धि र सुशासनलाई हामीले सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ। यो चारवर्षमा हामीले गरेको विकासबाट जनताले सन्तोष गरेको पाएका छौँ। तपाईंहरूले भन्ने त स्वाभाविक भयो मेयरसाबले कायापलट गर्नुभयो भनेका छन् त जनताले? एकदमै। ९५
प्रतिशतभन्दा बढी जनताकै कुरा गरेको हुँ। सबैतिरबाट राम्रो भएको प्रतिक्रिया पाएका छौँ। केही विरोध गर्नेहरु पनि हुनुहुन्छ। विरोध गर्ने खबरदारी गर्नेहरु पनि चाहिन्छ। अझै राम्रो गर्न लक्ष्यमा पुग्न खबरदारी जरुरी छ। महानगरमा गरिएको कामबाट जनता खुसी भएर धन्यवाद दिनुभएको छ। उसोभए चार वर्षमा बजेट ओइरै लगाउनुभयो? मैले ७
सय ५३ वटै स्थानीय तहको अध्ययन विश्लेषण गर्दा देशका ६ वटा महानगरमध्ये एक भरतपुर महानगरपालिका बजेट निकासामा मात्र होइन कार्यान्वयनको हिसाबले पनि पहिलो महानगर बनेको छ जस्तो लाग्छ। यसमा सबै क्षेत्र समेटिएका छन्। सडक र पूर्वाधार बनेका छन्। कृषि शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले फड्को मारेका छौँ। केही
मेगा प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा छन्। समानुपातिक सन्तुलित ढंगबाट हामीले महानगरलाई नयाँ विकासको मोडल बनाएर अगाडि बढेका छौँ। यहाँको विकासमा सरकार मात्र होइन निजी क्षेत्र लगानीकर्ता सबैलाई समेटेर एउटा उदाहरण पेस गरेका छौँ।
२०७८ मंसिर १०, शुक्रबार प्रकाशित0Minutes 893 Views